Amin'ny fitiavana ny hafa
"Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra hianareo tahaka ny zanaka malala; ary mandehana amin'ny fitiavana, toy ny nitiavan'i Kristy anareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra, ho hanitra ankasitrahana, hamonjy antsika." - Efes. 5:1,2.
Tokony hanaraka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala ianareo, hankato ny fitakiany rehetra ary handeha araka ny fitiavana nitiavan'i Kristy antsika (...) Ny fitiavana no nampihetsika sy nampandeha ary nampiasa an'i Kristy. Tonga Izy hamihina an'izao tontolo izao amin'ny sandrim-pitiavany (...)
Natao hanaraka ny ohatra navelan'i Kristy isika ka hanao Azy ho MôdeIy mandra-pahatongantsika ho tia ny hafa tahaka ny nitiavany antsika koa. Tiany halatsaka ao am-pontsika io lesona lalina momba ny fitiavana io (...) Raha efa natolotrareo ho amin'ny fitiavan-tena ny fonareo, dia aoka hovontosan'i Kristy amin'ny fitiavany izany. Iriny raha ho tia Azy amin'ny fontsika rehetra isika. Mampirisika ihany koa Izy, eny, mandidy mihitsy aza fa tokony ho tia ny hafa isika tahaka ny efa nanomezany ohatra ho antsika. Nataony ho famantarana ny maha-mpianany antsika ny fitiavana. Izao no fetra natao hotratrarina : "Mifankatiava hianareo, tahaka ny nitiavako anareo". Endrey izany haavo sy halalina ary velaram-pitiavana! Tsy natao ho an'olom-bitsy niangarana manokana izany fitiavana izany fa mahatratra ny tsotra sy ny manetry tena indrindra amin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Hoy i Jesôsy: "Araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko." (...) Ny fitiavana sy ny fangoraham-po tian'i Jesôsy homentsika ny hafa dia tsy misy ifandraisany amin'ny fihetseham-po diso toerana, izay fandrika ho an'ny fanahy. Fitiavana tovozina avy any an-danitra mihitsy izany, izay efa nanomezan'i Jesôsy modely tamin'ny alalan'ny fitsipika sy ny ohatra. Impiry tokoa moa isika no mifanilikilika sy mifampihatakataka raha tokony hifaneho izany fitiavana izany? (...) Ny vokany dia fanalavirana an'Andriamanitra sy tsy fahampian'ny fanandramana ary fahasimban'ny fitomboana kristianina (...)
Ny fitiavan'i Jesôsy dia fitsipika miasa ka mampifamatotra ny fo rehetra amin'ny fatoran'ny fisakaizana kristianina. Izay rehetra hiditra ny lanitra dia tsy maintsy tanteraka amin'ny fitiavana aloha dieny ety an-tany; satria any an-danitra dia ny Mpanavotra sy ny voavotra no hiantefan'ny fifantohantsika manokana. — YI, 20 Oktobra 1892.